ဘင်္ဂါလီအရေးကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုရှိလင့်ကစား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဝင်ရောက်မှု ၃. ၄၄သန်းရှိသဖြင့် ယခင်နှစ်ကထက် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာကြောင်း Bangkok Post သတင်းကဆိုသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၂.၉ သန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ ၃.၄သန်း ပြန်တက်ခဲ့ ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
ဟိုတယ်/ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ထွေးက“ကျနော်တို့ ခရီးသွားမြှင့်တင် ရေး အစီအစဉ်တွေ အများကြီး လုပ်ပေးလို့ အခုကိန်းဂဏန်းတိုးတက်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အစိုးရကလည်း အရင်က ကန့်သတ်ထားတဲ့ နေရာတွေ လည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကို ခွင့်ပြုပြီး ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆိုကြောင်း Bangkok Post က ဖော်ပြသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယုံကြည်စိတ်ချသည့် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်ရရန် ခက်ခဲနိုင်သကဲ့သို့ ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘဏ်များစာရင်း အရည်အသွေးကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်က စစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုခံခဲ့ရဖူးကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
ယမန်နှစ်သြဂုတ်လက ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရဲကင်းနှင့် လုံခြုံရေး ကင်းစခန်းများကို ARSA မွတ်စလင် စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က တိုက်ခိုက်သဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ သေဆုံးခဲ့ရာ စစ်တပ်က ရှင်း လင်းသဖြင့် ဘင်္ဂါလီ ၇သိန်းဝန်းကျင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးသည်ဟု သတင်းများက ဆိုသည်။
ယင်းအပေါ် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်တေလာဆန်က မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီများအပေါ် ပြုမူပုံကို လူမျိုးရေးသုတ်သင်ခြင်းဟု ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည်။
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ထွေးက “ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ခရီးသွား ဦးရေ ၃.၅ သန်းလို့ ကျနော်တို့ မျှော်မှန်းထားပေမယ့် H1N1 ရောဂါကြောင့် ၃. ၄၄ သန်းပဲ ရရှိပါ တယ်” ဟု ရှင်းပြသည်။
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းပဋိပက္ခ၏ ဂယက်မှာ ဧရိယာအကန့်အသတ်ရှိနေသဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အဓိကထိခိုက်စရာ မရှိခဲ့ကြောင်း သူကဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့လှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းကောင်စီကလည်း မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ၈.၄ သန်း အထိ တိုးတက်ကာ တိုင်းပြည်၏ အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု(GDP)၏ နံပါတ် ၁အဆင့်ရှိလာ နိုင်ကြောင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက ခန့်မှန်းထားပြီးဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်အရောက်တွင် ၈ဒသမ၄ သန်းတိုးတက်လာပြီး တိုင်းပြည်၏ အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု (GDP)၏ နံပါတ်တစ်အဆင့်ရှိလာနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ခရီးသွား လုပ်ငန်းကောင်စီက ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ခန့်မှန်းထားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုလုပ်နေသည့် Myanmar Strategic Holdings Ltd၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် အန်ရီကိုစီဆန်နီကမူ “၂၀၁၇ ခုနှစ်က ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ ဈေးကွက်တခုလုံး ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဥရောပဘက်က ခရီးသွားတွေ အလာနည်းခဲ့ပါ တယ်” ဟု သုံးသပ်သည်။
သို့သော် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများဘက်မှ ခရီးသွားများ ပိုမိုလာရောက်သည့် အတွက် အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိခြင်းမှာ ကောင်းကွက်တခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား တို့ကဲ့သို့ အာရှမြောက်ပိုင်းမှ ခရီးသွားများလည်း ပိုမိုလာရောက်ကြောင်း သူကဆက်ပြောသည်။